Klein Blue + Logs, Miverena Amin'ny Fahadiovan'ny Fiainana | Fang Hua International - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Klein Blue + hazo, Miverina amin'ny fahadiovan'ny fiainana | Fang Hua International
Klein Blue + hazo, Miverina amin'ny fahadiovan'ny fiainana | Fang Hua International
2021 / 06 / 02 FisokajianaInterior design 6279 0
“Ny manga dia ny lanitra, ny rano, ny rivotra, ny lalina sy ny tsy manam-petra, ny fahalalahana sy ny fiainana. Ny manga no loko ilaina indrindra eo amin'izao rehetra izao. ”
– Mpanakanto frantsay Yves Klein Yves Klein
Ny tahan'ny RGB dia 0, 47, 167. Ny isa mazava dia tsy mampihena ny fahatairana mahatsapa rehefa mifanatrika aminy. Io dia fitambaran'ny "International Klein Blue", ilay malalaky ny tontolon'ny lamaody. Hatramin'ny taloha ka hatramin'izao, ny manga dia teo foana tamin'ny eritreritry ny olona ny ho avy. Tsy maintsy misy dikany manokana izany eo amin'ny fiainantsika, izay mifandray akaiky amin'ny fonenantsika. Ny fiainana ara-nofo dia be loatra, ary bebe kokoa ny fikatsahana haavo ara-panahy. Ny "Klein blue" dia fantatra amin'ny anarana hoe manga mety, ilay manga tanteraka. Ny mazava sy foana ao aminy dia mahatonga ny olona ho very ao aminy. Avelao hiverina amin'ny fahadiovana ny fiainana sarotra.
Ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitra fisakafoana dia manaparitaka ny fizarazaran-javatra misy azy ary mamorona toerana malalaka azo takalo. Ny asany dia mahatsapa ny fifandraisana mifameno. Ny kanto sary hosodoko pop, ny lohahevitra mozika pop ary ny "Klein Blue" dia atambatra, ary ny fifangaroan'ny endrika endrika tsotra sy ny loko. Ity dia fandikana lalina kokoa amin'ny fanahin'ny zavakanto. Ny studio sary mozika dia manangona ny karazana fitaovana fanaovana sary mozika rehetra hanehoana ny fahatsapana sy ny faniriana. Hoy i Klein indray mandeha "mba hanehoana izany fahatsapana izany, tsy misy fanazavana, ary tsy misy teny, dia afaka mampahafantatra ny fo izany." Mampiseho fihetsika fiainana izany.
Ny fanandramana dia mitondra fiainana fiainana tsara kokoa. Ny fiasa sy ny haingo dia atambatra mba hanadio ireo zavatra sarotra atao raha tsy izany. Izy ireo dia aseho tsara ao amin'ny fitehirizana ny trano onenana. Ny efitrano fidirana, lakozia, fandroana ary efitra fatoriana dia natao indrindra amin'ny fitehirizana ny zavatra ilaina isan'andro sy akanjo. Izy io dia mety amin'ny fitahirizana mihidy noho ny tahan'ny fampiasana avo sy ny fako marobe. Ny efitrano fisakafoanana sy ny studio dia natao fampirantiana sy fanangonana ihany, noho izany dia mety amin'ny fampirantiana misokatra izy ireo. Ny fitahirizana isaky ny habaka dia voalamina amin'ny fomba gadona.
Miverina amin'ny fahadiovana ny zava-drehetra. Tsy dia manana haingon-trano be loatra io, mandehana amin'ny fonao fotsiny dia fantaro ny tontolonao manokana, toy ny "Klein Blue"!
Anaran'ny tetikasa: Trano modely Fangyuan ∙ Heshan Yunshan Poetry II
Space Design: Guangzhou Fang Hua International Design Group Co.
Famolavolana fanaka malefaka: Guangzhou Fang Hua International Design Group Co.
Taona nahavitana: Novambra 2020
Ekipa mpamorona: Zhou Xiang, Zhan Qijun, Li Jianyong, Yuan Bi, Chen Jianting, Zhang Jifa, Huang Chongyue
Adiresin'ny tetikasa: Heshan, Guangdong
Tetikasa tetikasa: 98 metatra toradroa
Saripika momba ny tetikasa: Saripika mieritreritra
Mpanjifa: Guangzhou Fangyuan Real Estate Development Co.
Ny fomba skandinavianina dia fantatra amin'ny fahatsorany sy ny fahaizany miasa. Na dia mifantoka amin'ny tombontsoan'ny besinimaro aza izy io dia tsy hoe tsy mitandrina ny akany. Ny fikarakarana azy dia napetraka na aiza na aiza, hita taratra ny fanajana ny fomban-drazana, ny fankasitrahana ny akora natoraly, ny fifehezana amin'ny endrika sy ny haingo, ary ny fiezahana hanana firaisan-kina amin'ny endrika sy asa. Raha manana zavatra iraisana izy ireo dia tsy maintsy ny fahatsorana, ny mivantana, ny fiasa ary ny fanakaikezana ny natiora. Fomba Skandinavianina milamina, fa tsy endrika mandresy lahatra.
Ny kabinetra kiraro multifunctional ao amin'ny habakabaka fidirana dia fombam-pandehanana manomboka amin'ny korontana ka hatramin'ny filaminana. Aorian'ny fidiranao dia tsy ny kitapo sy lakile entinao eny an-tananao ihany no apetrakao, fa ny olana rehetra any ivelany koa, ary miova ho kapaoty. Io dia mampiala ny fahatsapana sy ny vatana mitebiteby avy hatrany. Nasiana talantalana manokana hanatsarana ny fampiasana ny habaka rindrina mitsangana ary hihaona amin'ny filàna fitahirizana vonjimaika.
Betsaka ny toerana ao an-trano izay azo sokafana indray ary atambatra indray. Ohatra, ny efitra fisakafoana sy ny lakozia. Ny habaka an-dakozia mihidy tany am-boalohany nanokana ny fifandraisana amin'ny fianakaviana. Nesorina ny rindrina. Miaraka amin'ny fandaminana bara kely, mampifandray ny efitrano fisakafoanana sy ny lakozia izy io, manalemy ny sakana amin'ny habaka. Io dia ahafahana mamadika ny fizotran'ny fanaovana amin'ny fianakaviana ny fizotran'ny mahandro mankaleo. Ny latabatra fisakafoanana sy ny seza misy zorony boribory dia voafidy manokana amin'ny fiarovana azy ireo mba hampihenana ny ratra vokatry ny fifandonana mandritra ny fampiasana azy.
Ny kabinetra amin'ny gorodona, izay mifamatotra amin'ny kabinetra kiraro, dia mamakivaky ny efitrano fandraisam-bahiny sy fisakafoana. Izy io dia manana ny asan'ny fitehirizana nefa tsy be loatra. Ny latabatra kafe dia voafidy ho maodely kely ho an'ny hetsika mora sy fitambarana. Ny zava-drehetra dia natsangana ho an'ny endrika mifanentana raha toa ka manatsara ny famoahana ny efitrano fandraisam-bahiny.
Ny toerana kely kokoa dia natao tsara hitehirizana: ny ambaratonga ambany amin'ny tsihy tatami ao amin'ny efitranon'ny ankizy dia toerana fitahirizana manana fahaiza-manao lehibe. Izy io dia afaka mitahiry entana amin'ny vanim-potoana toy ny quilts. Ny efitrano fianarana dia manome ny tanjon'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ny faran'ny latabatra lava dia azo ampiasaina ho toerana fitsangatsanganana vetivety. Ny kabinetra ambany dia mitahiry ny kilalao mahazatra an'ny ankizy ary mandamina ny toerana araka izay azo atao.
Ny fanangonan-karena dia mahatonga ny zoro rehetra amin'ny habakabaka hampiseho ny hatsaranao manokana. Ny varavarana lamba mangarahara dia mahatonga ny habakabaka hazava kokoa, izay taratry ny fahatokisan-tena amin'ny fiainana mahafinaritra. Ny efitrano malalaka misokatra eo ambanin'ny efi-tranonao dia misy jiro maivana ihany koa ho toy ny jiro amin'ny alina. Tsy manahirana ireo olona ao amin'ny fianakaviana matory ny jiro amin'ny hazavana takariva. Fotoana faran'ny herinandro: mamaky boky tsara, manandrana dite mafana iray kapoaka. Afaka mifantoka amin'ny fisainana sy miala sasatra ianao.
Ekipa mpamorona: Zhou Xiang, Zhan Qijun, Yi Yongxiang, Yuan Bi, Zou Jingming, Zhang Jifa, Zhang Sujiang
Faritra tetikasa: 127 metatra toradroa
Photography amin'ny tetikasa: Mieritrereta sary
Fikambanana mpanjifa: Guangzhou Fangyuan Real Estate Development Co.
Fang Hua International Design Group dia natsangana tamin'ny 2007. Manaraka ny fomba fijery filozofika momba ny "kianja, faribolana ary firindrana, fahendrena tatsinanana". Tsy mitsahatra mijery ny fampifangaroana kanto ny maritrano sy ny fiainana, ary mamaky ny fifanakalozan-kevitra amin'ny famolavolana amin'ny fomba maro. Izy io dia manolo-tena hanome serivisy famolavolana tokana amin'ny sehatra rehetra manomboka amin'ny drafitra, ny maritrano, ny firafitra, ny tontolo ka hatrany amin'ny fanaka anatiny sy malefaka.
Manana ny mari-pahaizana Grade A amin'ny indostrian'ny fananganana (injenieran'ny maritrano) ary ny tanjaka malefaka mahery. Nahazo mari-pankasitrahana 2 momba ny patanty nasionaly, ekipa matihanina 100+ ary loka maro malaza. Izy io dia manompo hatrany ireo marika lehibe rehetra miaraka amin'ny tanjon'ny "mpanjifa aloha" sy "toe-tsaina henjana an'ny mpanao asa tanana".
Previous :: Retro maoderina, tononkalo nostalgika amin'ny kanto sy malefaka | Dishang Design Next: Tononkira Morandi, Fandikana ny Zen Atsinanana + Estetika Maoderina | YORO Yorong Design
2021 / 08 / 15 3206
2021 / 08 / 15 4082
2021 / 08 / 15 3603
2021 / 08 / 14 3338